क्याप्टेन साहेब ब्राम — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » देवदह-रत्न, मुख्य समाचार → क्याप्टेन साहेब ब्राम
May 26, 2016६८९ पटक
देवदह रत्नको आजको तेश्रो श्रृखला सम्म आईपुग्दा यस स्तम्भलाई तपाईले देखाउनुभएको माया, सुझाव सल्लाह प्रति हामी कृतज्ञ छौ । देवदह बुद्धको मावली हो र यहाँ यस्ता प्रतिभाहरु लुकेका छन् जसलाई हामी मध्ये कोही कसैले मात्र चिनेका छौ । देवदहका युवा साहित्यिक हस्ति विनोद उदय, अनलाईन पत्रिका उज्यालो लाल्टिन र देवदह साप्ताहिकले एउटा नौलो प्रयास गरेको छ, देवदहले नचिनेका व्यक्तिहरुलाई संसारमाझ चिनाउने । आजको तेश्रो श्रृखलामा प्रस्तुत छ वि. सं. २०३९ सालमा पाल्पाको ख्याहामा जन्मेका नेपालका ‘पहिलो’ र ‘एक्लो’ पानीजहाज क्याप्टेन ब्राम पाण्डे बारे विनोद उदयको यो आलेख- सम्पादक ।
अष्ट्रेलिया वरपरको समुन्द्रमाथी यता र उता गरि रहन्छन् ब्राम पाण्डे । अष्ट्रेलियाबाट धेरै टाढा टाढा पुग्छन् । जता पुग्छन् पानीकै बाटो भएर हिड्छन् । पानीमाथि हिड्ने अरु के पो हो र ? पानीजहाज त हो नी । हो ब्राम पाण्डे पानीजहाजमा हिड्छन् यात्रु भएर हैन क्याप्टेन भएर । समुन्द्रले नछोएको देश नेपाल । भुपरिवेष्ठित । समुन्द्रनै नभएपछि पानीजहाज कहाँबाट हुनु । यही समुन्द्र र पानीजहाज नभएको देशकॉ ‘पहिलो’ र ‘एक्लो’ पानीजहाज क्याप्टेन हुन् उनी। यो हामी नेपालीका लागि ठूलो महत्वको विषय भैगयो । अझ उनी त हुन्, हाम्रै देवदहबासी । हामी देवदहबासीका लागि कति महत्व र गौरवको कुरा हो भनिरहनु परेन ।
वि. सं. २०३९ सालमा पाल्पाको ख्याहामा जन्मेका ब्रामको अध्ययन भने वुटवलबाट सुरु भयो । वुटवलको तिनवटा विद्यालयबाट कक्षा७ सम्म पढाई सकाएका उनले देवदहमा बसाई सरेपछि केरवानी उ. मा. वि. बाट प्रवेशिका र प्लस टु उत्तिर्ण गरे । लगत्तै वुटवलबाट कम्प्युटर प्रविधिमा स्नातक गरे । काठमाडौबाट मास्टर्स इन बिजनेस स्टडिज उत्तिर्ण गरे । त्यसपछि भने उनी अष्ट्रेलिया हानिए । त्यहाँबाट पनि उनले प्रोफेसनल एकान्टिङमा मास्टर्स गरे । अध्ययनका साथसाथै उनले त्यहाँ काम पनि गर्थे एउटा रेष्टुरेन्टमा । यस्तै दिनहरु मध्येको एकदिनले उनको जीवनमा नसोचेको टर्निङ पोइन्ट ल्याइदियो । एकदिनको कुरा हो उनी समुन्द्र हेर्न गएका थिए, साथीहरुसंग । उनले देखे समुन्द्रमाथि तैरिरहेको एउटा पानीजहाज र देखे त्यसभित्र काम गरिरहेका मान्छेहरु । पानीजहाज भित्र रेष्टुरेन्ट, बार, स्विमिङपुल, जिमखाना लगायत सुविधाहरु देखेर अचम्मित भए । मान्छेहरु भन्छन् नि पहिलो नजरमै प्रेमभयो, हो त्यस्तै भयो उनलाई । त्यो दृश्य देखेपछी उनमा खै कताबाट हो कताबाट जसरी पानि जहाज भित्र काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच आयो । पानीजहाजसंग उनको पहिलो नजरमै प्रेम भयो ।
इमान्दारीता पूर्वकको मेहेनत र कामप्रतिको रुचिको कारण उनी सोही विभागको फस्ट अफिसर पदमापुगे । उनको पद मात्र बढेन, उनको काम प्रतिको लगाव पनि बढ्यो, कम्पनीले उनलाई गर्ने विश्वास पनि बढ्यो ।
घरमा गए, भ्याकेन्सी छ कि भनेर इन्टरनेटको आगन चहारे । यसरी उनले केही समय गुजारे । इच्छा शक्ति भएपछि जे पनि सम्भव हुन्छ भनेजस्तै भयो । नभन्दै एकदिन एक पानीजहाज कम्पनीले स्टिवार्ड पदका लागि जनशक्ति माग ग¥यो । जब यो सूचना इन्टरनेटकै माध्यमबाट थाहा पाए, उनीखुसीले उफ्रिए । उनले हतार हतार आवेदन दिए । कम्पनीले रुचायो, रुचाउन उनले बाध्य पारे । उनको नाम निस्कियो । एकछिन त उनी झण्डै बेहोस भए, खुसीले । हेर्दाहेर्दै उनी पानीजहाजमा जागिरे बने । उनको सपनाले उडान सुरु ग¥यो । अथवा यो उनको सपनाको पहिलो पाइला थियो ।
स्टिवार्ड भनेको पानी जहाजका यात्रुहरुलाई सहयोग गर्ने एउटा पद हो । उनले यत्तिमै चित्त बुझाएनन् । त्यसरी खुम्चिएर बस्ने स्वभावका थिएनन्/होइनन् उनी । स्टिवार्डमा काम गर्दागर्दै उनले यात्रुहरुलाई सुरक्षा दिने मरिन विभागमा तालिम लिए र त्यसमै कामगर्न थाले । इमान्दारीता पूर्वकको मेहेनत र कामप्रतिको रुचिको कारण उनी सोही विभागको फस्ट अफिसर पदमापुगे । उनको पद मात्र बढेन, उनको काम प्रतिको लगाव पनि बढ्यो, कम्पनीले उनलाई गर्ने विश्वास पनि बढ्यो । फलस्वरुप कम्पनीले नै उनलाई पानीजहाज सम्बन्धी अध्ययन गर्ने मौकादियो । उनले कामगर्दै, पढ्दै गरेर स्नातोकोत्तर उत्तिर्ण गरे । त्यसपछि त के चाहियो र, उनीलाइसेन्स प्राप्त क्याप्टेन भई गए । यो खबर समुद्र पार गरेर जहाँजहाँ नेपालीहरु फैलिएका छन् त्यहाँत्यहाँ फैलियो । सिधा कुरा, संसारभर फैलियो । जब उनी पानीजहाजकॉ ‘पहिलो’ र ‘एक्लो’ नेपाली क्याप्टेन हुन् भन्ने खबर फैलियो, ब्राम एकाएक सेलिब्रेटी बने ।
अष्ट्रेलियामा धेरैजसो क्याप्टेनहरु छिप्पिएका उमेरका छन् । ब्राम कागको बथानमा बकुल्ला भनेझै छन् । त्यसैले त उनी अष्ट्रेलियामा चर्चित छन् । त्यहाँ भेटिने नेपालीहरुले मात्र होइन विदेशीहरुले पनि एउटा भुपरिवेष्ठित राष्ट्रको नव जवान केटालाई क्याप्टेनको भूमिकामा देखेर अचम्म मान्छन् र उनीसंग तस्विर खिच्न लालायित हुन्छन् ।
पानीजहाजमा क्याप्टेन भन्ने पद धेरै ठूलो पद हो । सबैभन्दा ठूलो । अरबौको जहाज, अरबौका सामानहरु र हजारौ संख्यामा रहने यात्रुहरु सबैको जिम्मेवारी क्याप्टेनकै काधमा हुन्छ । त्यसभित्र हुने हरेक गतिविधीहरुको जस अपजस क्याप्टेनमै आउने हो । एउटा नेपालीले, त्यो पनिकमउमेरको, त्यसरी कम्पनीको विश्वास जितेर जिम्मेवारी पाउनु आफैमा ठूलो कुरा हो । वास्तवमै विकसित देशहरु त्यसै विकसित भएका होइनन् । उनीहरुले मात्र व्यक्तिको क्षमता हेर्छन्, अरु केही हेर्दैनन् । कुन उमेरको, कुनभाषीको, कुन देशको, कुनजातीको अह केही हेर्दैनन् । सिर्फ योग्यता र क्षमता हेर्छन् र त्यसै अनुरुपको जिम्मेवारी दिन्छन् । ब्राम आफ्नो क्षमताले नै त्यो स्थानमा पुगेका हुन् ।
हालसम्म आठ हजार घण्टा समय पानीजहाज चलाइसकेका उनलाई कहिल्यै लागेको थिएन पानीजहाजको क्याप्टेन बन्छु भन्ने । उनलाई मात्रै कहाँ हो र उनका अभिभावक, साथीसंगाती कसैलाई पनि लागेको थिएन । “कहिल्यै पनि सोचेकै थिइन क्याप्टेन बन्छु भनेर”, उनले अगाडी थपे, “हुन त पानीजहाज देखेकै थिइन, नदेखेको कुरा कसरी सोच्न सक्छ मान्छे, तर जहिले देखेम क्लिकभए । मेरो लाइन यहीहो भन्ने लाग्यो ।”हुनपनि उनी काममा यति धेरै इन्जोय गर्छन् कि उनलाई काममा गए झै होइन घुम्न गएझै लाग्छ । काममा जान हतारिन्छन् ।
अष्ट्रेलियामा धेरैजसो क्याप्टेनहरु छिप्पिएका उमेरका छन् । ब्राम कागको बथानमा बकुल्ला भनेझै छन् । त्यसैले त उनी अष्ट्रेलियामा चर्चित छन् । त्यहाँ भेटिने नेपालीहरुले मात्र होइन विदेशीहरुले पनि एउटा भुपरिवेष्ठित राष्ट्रको नवजवान केटालाई क्याप्टेनको भूमिकामा देखेर अचम्म मान्छन् र उनीसंग तस्विर खिच्न लालायित हुन्छन् । उनी अत्यन्तै सहयोगी स्वभावका छन् । काम नपाएर तथा अध्ययन शुल्क तिर्न नसकेर दुख पाएका धेरै नेपाली विद्यार्थीहरुलाई उनले सहयोग गरेका छन् । कतिलाई त केहीदिन घरमै राखेर समेत उनीहरुको व्यवस्था मिलाइ दिएका छन् । “त्यतिमात्रै होइन मैले कामगर्ने पानी जहाजमा दर्जन बढी नेपाली विद्यार्थीहरुलाई रोजगारी समेत मिलाइ दिएको छु ।”उनले भने । गत बैशाखमा नेपालमा भुकम्प गएका बेला उनले गरेका कामहरु प्रशंसनिय छ । सहयोगका लागि विदेशी साथी र संघसंस्थाहरुलाई आग्रह गरे, सहयोग संकलन गरे रपठाए । अप्टस टेलिकम र टिपिजी टेलिकमले उनको व्यक्तिगत चिनाजानी र आग्रहका आधारमा करिब तिन हप्ता नेपालमा फोन गर्नको लागि निशुल्क गरिदिएको घटना उल्लेखनिय छ ।
करिब २ बर्ष अघि वुटवलकी प्रभा कंडेलसंग वैवाहिक बन्धनमा बाधिएका उनको सफलताको राज हो, साहस र कामप्रतिको लगाव। उनी सानै देखि आटिला स्वभावका थिए । अरुलाई डर लाग्ने काम उनलाई गरीहाँलु जस्तो लाग्थ्यो । दुई दिदि र तिनभाई मध्येमा माहिला ब्राम आफ्नो सफलताको श्रेय बुवा रामचन्द्र पाण्डेलाई दिन्छन् । आमा तुलसादेवी पाण्डे र दाजु विराज पाण्डेले पनि आफूलाई अगाडि बढ्न निरन्तर साहस प्रदान गरिरहेको उनी बताउछन् । “उहाँहरुको निरन्तरको ‘तैले धेरै गर्न सक्छस्’ उत्प्रेरणाले यहाँ सम्म आईपुगेको हुँ”उनी भावुकबने । के छ त उनको भावी योजना?“जे गर्छु यसमै गर्छु, सिक्न धेरै बाँकी छ ।”उनले उत्साहित आवाज सुनाए, “अझ ठूला ठूलाजहाजहरु चलाउनु छ, हेरौ के के गर्न सकिन्छ ।”जल, थल र हवाई सबै मार्गको क्याप्टेन बन्ने तथा उद्दार हेलिकप्टरको पाइलट भएर देश भित्रै सेवा गर्ने उनको योजना छ । उनलाई शुभकामना ।